Anarchist news from 300+ collectives 🏴 AnarchistFederation.net Auckland May Day Rally – Solidarity with Myanmar, – 🏴 Anarchist Federation
Online-Meeting: Introducing Global Garment Workers’ Solidarity Network -181 minutes ago from Global May Day
Organise! magazine issue 94 – Spring 2021 -142 minutes ago from Anarchist Federation (UK)
E. Armand, “En-dehorism” (1936) 59 minutes ago from Libertarian Labyrinth
Saturday 1 May,
May Day ကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိအလုပ်သမားများနှင့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများကကျင်းပကြသည်။ မေဒေးတွင်သမဂ္ဂများသည်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်အတွက်မြန်မာ – လူထုကွန်ယက်ဖြစ်သော Democracy for Myanmar နှင့်ပူးပေါင်းကြပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အလုပ်သမားသမဂ္ဂများသည်လူထုအခြေပြုမနာခံမှုလှုပ်ရှားမှုကို ဦး ဆောင်သူများထဲတွင်ပါဝင်သည်။
UnionAID သည်ပြည်ထောင်စုမိတ်ဖက်များ၊ မြန်မာလူငယ်ခေါင်းဆောင်များအစီအစဉ်ကိုပြီးစီးခဲ့သောခေါင်းဆောင် ၁၀၀ ကျော်တို့မှတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ခိုင်မာသည့်ဆက်ဆံရေးရှိပါသည်။
Auckland May Day Rally – Solidarity with Myanmar (facebook.com)
‘Lively’ Palestine solidarity celebration in Auckland May Day Food Drive Friday May 1st 4-6pm in Marshal Auckland Vegan Actions “Glam Up” and Protest at Auckland’s Boxing Day Races Auckland Lockdown Protest Auckland Pride March Drop the prosecutions of Bernard Collaery and Witness K – Protest March 29, Auckland Auckland is AWSM! Myanmar: solidarity with the railway workers of Rangoon PEGIDA Racists Rally Again in Toronto, Confronted by Antifascsists, May 4, 2019 May Day Cleveland 2019 March And Rally May Day Collective, Solidarity & Defense – 12 Things to do Instead of Calling the Cops